Ticketing Staff Archives - Glory Assumption Space
Ticketing Staff Training (International) - Male/Female – (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tours Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁ ) Ticketing Staff Training (International) - Male/Female – (5) Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Ticketing နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတအသင့်အတင့်ရှိရ မည်။ - Microsoft Office / Internet and email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - English4Skills ကောင်းမွန်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအားအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စား၍သင်ယူလေ့လာချင် စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Ticketing Staff – Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Travels & Tours Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Ticketing Staff – Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ကမာရွတ်မြို့နယ်။
-ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English စကားအနည်းငယ်ရရမည်။ - Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Ticketing နှင့်ပတ်သက်သည့် Software တစ်ခုခုအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
1.Air Ticketing Staff (International) – M/F (5) Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/အလုံမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travel & Tour Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Air Ticketing Staff (International) – M/F (5) Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/အလုံမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ (သို့ မဟုတ်) အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Ticketing(International) ပိုင်းအတွေ့ အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - Amadeus, Sabre, Galileo အစရှိသော Ticketing Software များအားလုံး ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်ရမည်။ - English Intermediate ပြောနိုင်ရမည်။ - Computer , Internet , Email သုံးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Ticketing Staff (Domestic) – Male/Female – (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tour Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Ticketing Staff (Domestic) – Male/Female – (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြိုနယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Domestic Ticketing အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - Ticketing နှင့်ပက်သတ်သောဗဟုသုတကြွယ်ဝသူဖြစ်ရမည်။ - English4Skills basic ရှိပြီး၊ Microsoft Office/Internet and email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအားအမှန်တစ်ကယ်စိတ်ဝင်စား၍ သင်ယူလေ့လာချင်စိတ်၊ နာခံလိုစိတ်ရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Ticketing Staff (Domestics) – Male /Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွန် မြို့နယ် ရှိ Travel & Tour Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1. Ticketing Staff (Domestics) – Male /Female (5)Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Domestic Ticketing အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - Ticketing နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - English4Skills Basic ရှိပြီး (Word,Internet & Email ) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Ticketing Staff အလုပ်သင် (Domestics /International ) - Male /Female (10 ) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tours Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Ticketing Staff အလုပ်သင် (Domestics /International ) - Male /Female (10 ) Posts/လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုတက်ဆဲ (သို့မဟုတ်) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - English4Skills အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ - General Knowledge & Computer Internet & Email ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Ticketing Staff (International ) - Male /Female (10)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tours Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Ticketing Staff (International) – Male /Female (10 ) Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - International Ticketing & Domestic Ticketing အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - English Intermediate Skill General Knowledge & Computer Internet & Email ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Ticketing Staff - Male /Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောTravels & Tours Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Ticketing Staff – Male/Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /လမ်းမတော်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ - English စာရေး၊ဖတ်၊ပြောနိုင်ရမည်။ - Ticketing နှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ - Abaccus,Amadeus,Galieao,Sybire စသည့် Certificate ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၀ မှ ၃၃ ကြားဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Ticketing Staff - Male/Female (10) Posts / Salary -180,000 Kyats (Above) .
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။အလုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Travel & Tour Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Ticketing Staff –Male / Female (10) Posts / Salary – 180,000 Kyats(Above) / Ahlone Township . - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည် ။ - Tiketingနှင့်ပက်သက်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Word (M&E) , Excel , Internet Email ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com,gasrecruit.hr6@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။